မေး။ ။ ဘယ်မှာလဲ။ ကားရပ်နားရန်နေရာရှိသလား။
A: ကျွန်ုပ်တို့၏လိပ်စာမှာဘုရားရှိခိုးကျောင်းလမ်းထောင့်ရှိဘုရားရှိခိုးကျောင်းနှင့်ဘုရင်လမ်းများရှိ Burlington မြို့လယ် (လက်ရှိ Burlington Telecom အဆောက်အ ဦး) ဖြစ်သည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကိုယ်ပိုင်ကားရပ်နားရန်နေရာမရှိပါ။ သို့သော်နှစ်ထပ်အချင်းဝက်အတွင်းတွင်မီတာနှင့် non-metered ကားပါကင်ရှိပါသည်။
ဖြေ။ ။ ဒီစာမျက်နှာကိုကြည့်ပါ
Q: Community Justice Centres နှင့် Court Diversion အကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ။
ဖြေ - တရားရုံးသို့လွှဲပြောင်းခြင်းသည်ဗားမောင့်ဥပဒေတွင်ဖော်ပြထားသောအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းမှတစ်ဆင့်လူတို့သည်တရားမ ၀ င်လုပ်ရပ်အတွက်ရိုးရာတရားရုံးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုအဖြစ်တာ ၀ န်ယူသည်။ Community Justice Centres (CJC's) သည်ကျယ်ပြန့်သည့်ထုထည်အဆောက်အ ဦ များဖြစ်ပြီး၊ ဒေသအလိုက် ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးပေးသည်။ Chittenden အပါအ ၀ င်ခုနခုခုခုခုတွင် CJC မှ Court Diversion ကိုရယူသည်။ ဗားမောင့်၏ CJC ၂၀ သည် ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကိုဗဟိုမှကွဲပြားပြီးပြင်ဆင်မှုဌာနမှငွေကြေးထောက်ပံ့သည်။ ၎င်းတို့တွင်ပြစ်မှုကျူးလွန်မှုအပြီးနှင့်အပြီးသတ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့များအပြင်ထောင်ထဲတွင်နေထိုင်ပြီးနောက်သူတို့ရပ်ရွာသို့ပြန်လာသူများအတွက်ဝန်ဆောင်မှုများပါဝင်သည်။ အချို့သော CJC ၏အခြားရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်များမှအပိုဝန်ဆောင်မှုများပေးသည်။ Court Diversion ကိုနိုင်ငံအားလုံးတွင်ထောက်ပံ့ထားပြီးရှေ့နေချုပ်ရုံးမှငွေကြေးထောက်ပံ့သည်။ ဤရန်ပုံငွေသည်လူထုအခြေပြု DLS အစီအစဉ်၊ လူငယ်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအစီအစဉ်၊ တာမာရက်နှင့် Pretrial ဝန်ဆောင်မှုများကိုလည်းထောက်ပံ့သည်။ Court Diversion နှင့် CJC မှပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုများစွာသည်ရပ်ရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းများအပေါ်မှီခိုပြီးပြန်လည်ထူထောင်ရေးတရားမျှတမှုအခြေခံမူများကိုအသုံးပြုသည်။
အကူအညီ။ ကျွန်ုပ်ရရှိသောအသက်မပြည့်သေးသောသောက်သုံးရေလက်မှတ်ကကျွန်ုပ်သည် ၁၅ ရက်အတွင်းသင်နှင့်အဆက်အသွယ်ရှိရန်လိုအပ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ငါမက်ဆေ့ခ်ျကိုခေါ်ခြင်းနှင့်ထားခဲ့ပါပေမယ့်သင်တို့ထံမှပြန်ကြားမကြားဘူးနှင့်နာရီ ticking!
A - စိတ်မပူပါနဲ့။ အရက် (သို့) ဆေးခြောက်ကိုချိုးဖောက်ခံလိုက်ရတဲ့မြို့၊ သင့်ဖုန်း၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ ထွက်ခွာခြင်းအားဖြင့်အဲဒီ“ နာရီကိုနှိပ်” ခြင်းအားရပ်တန့်သွားအောင်သင်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ထုတ်ပေးသောရဲဌာနမှအမှန်တကယ်လက်မှတ်နှင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုလက်ခံရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့စောင့်ဆိုင်းနေ ဦး မည်ဖြစ်ရာကျွန်ုပ်တို့ထံမှရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်းနေနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်းများထဲမှတစ်ယောက်နှင့်ဆက်သွယ်ပါလိမ့်မည်။
မေး - အိမ်နီးချင်းနဲ့ကျွန်တော်အငြင်းပွားနေတယ်။ သင်ကူညီနိုင်မလား?
A: ဖြစ်နိုင်ချေရှိတာ။ ကျွန်ုပ် တို့၌ ၀ န်ထမ်းများဖြစ်သော Barbara Shaw-Dorso တွင်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသောဖျန်ဖြေသူရှိသည်၊ သင် bshawdorso@burlingtonvt.gov တွင်သင်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ကိစ္စရပ်အားလုံးကိုကိုင်တွယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်စွမ်းရည်မရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသင်နှင့်ဆွေးနွေးနိုင်ပြီးသင့်လျော်သည့်အချိန်တွင်ညွှန်းနိုင်သည်။ အချို့ကိစ္စများတွင်ဤကိစ္စတွင်သင်နှင့်အတူကိစ္စတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
Q: တရားရုံးသို့ကူးပြောင်းခြင်းကိုအောင်မြင်စွာပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးယခုတွင်ကျွန်ုပ်သည်အလုပ်၊ ကျောင်းကိုလျှောက်ထားရန်လျှောက်ထားနေသည်။ ကျွန်ုပ်၏မှတ်တမ်းကိုထုတ်ဖော်ရန်လိုပါသလား။
A: သင်သည်သင်၏တရားရုံးလွှဲပြောင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်ပါကသင်၏မှတ်တမ်းသည်တံဆိပ်ခတ်ခြင်း (သို့) ဖယ်ထုတ်ခြင်းခံထားရပြီးတိုက်ခန်းအများစုကိုငှားရမ်းခြင်းနှင့်အလုပ်လျှောက်လွှာများကဲ့သို့သောကိစ္စရပ်များတွင်ဖော်ပြရန်မလိုအပ်ပါ။ သို့ရာတွင်ပြည်နယ်အရကွဲပြားနိုင်သည်။ ပြည်နယ်မှထုတ်ပေးသော (ဥပမာဥပဒေကျင့်သုံးခြင်း)၊ အစိုးရနှင့်အချို့သောပြည်နယ်ဥပဒေစိုးမိုးရေးရာထူးများအတွက်လျှောက်ထားသည့်အခါ၊ အများပြည်သူဆိုင်ရာရုံးသို့လျှောက်ထားသောအခါ၊ သေနတ်ဝယ်ယူသောအခါသို့မဟုတ်ဖုံးကွယ်ထားသောသယ်ဆောင်ရန်ပါမစ်လျှောက်ထားသည့်အခါ၊ ကျောင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောအလုပ်အတွက်သင်ထုတ်ဖော်ရန်လိုကောင်းလိုလိမ့်မည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကရှေ့နေနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်သည်သို့မဟုတ် VT ၏တရားဝင်အကူအညီဝက်ဘ်ဆိုက် သို့ဝင်ရောက်နိုင်သည် ။
A: အိမ်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုကိုမပေးသေးပေမယ့်သင်ကအဖွဲ့အစည်းတွေကိုညွှန်ပြနိုင်တယ်။ အကယ်၍ သင်သည်မကြာသေးမီကထောင်မှပြန်လွတ်လာပါက ကျွန်ုပ်တို့အသိုင်းအဝိုင်းပြန်လည်ထူထောင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှု များမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့အချို့ကူညီနိုင်သည် ။
မေး။ ။ Safe Driving Class ကိုတက်ချင်တယ်။ ဒါနဲ့ငါ့ကိုကူညီနိုင်မလား?
A: ဘာလင်တန် CJC သည် Safe Driving အတန်းအစားကိုမပေးနိုင်သော်လည်း Chittenden ကောင်တီအတန်းများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ Events စာမျက်နှာသို့သွားနိုင်သည်။ သင်စာရင်းသွင်းရန် (ကျွန်ုပ်တို့၊ သင်၏ရှေ့နေ၊ အစမ်းအရာရှိ) စသည်တို့ကိုဆက်သွယ်ပြီးဆက်သွယ်ပါ။
Q: ငါက panel ကိုမှလွှဲပြောင်းခဲ့သည်။ စားသုံးမှုဘယ်လောက်ကြာမလဲ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးဘယ်လောက်ကြာမလဲ။
ဖြေယေဘုယျအားဖြင့်တစ် ဦး စားသုံးမှုတစ်နာရီကြာသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးသည်ယေဘုယျအားဖြင့် ၃-၄ လအတွင်းကြာသော်လည်းသင်၏စာချုပ်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အချိန်ဇယားဆွဲနိုင်မှုအပေါ် မူတည်၍ အနည်းငယ်ကွဲပြားနိုင်သည်။
မေး။ ရဲကရဲကကျွန်တော့်ကိုအသက်မပြည့်သေးတဲ့သောက်နေတုန်းစာရွက်စာတမ်းတွေပေးခဲ့တယ်။ ငါအခုဘာလုပ်သင့်သလဲ
A: သင့် လူငယ်ပစ္စည်း ဥစ္စာ အလွဲသုံးစားမှုအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအစီအစဉ် သို့သင်သွားကောင်းပို့လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းသင်၏အသက်တာကိုမှားယွင်းစွာတင်ပြခြင်း / အတု ID ကိုအသုံးပြုခြင်းအတွက်လည်းသင်လက်မှတ်ရှိနိုင်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူအသီးအသီးအဘို့အလာမည့်ခြေလှမ်းများကိုပိုမိုစကားပြောပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုဖုန်းခေါ်ပါ Balla ကို 802-735-8275 သို့ဆက်သွယ်ပါသို့မဟုတ် bsankareh@burlingtonvt.gov တွင်အီးမေးလ်ပို့ပါ
Q: ငါဟာရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်ခံရသူတစ် ဦး ပါ။
ဖြေ။ ။ ဒါကိုခင်ဗျားဝမ်းနည်းပါတယ်။ အကယ်၍ သင်သည်ဘာလင်တန်၌ရာဇ ၀ တ်မှုနှင့် / သို့မဟုတ်ထိခိုက်နစ်နာမှု၏သားကောင်ဖြစ်ခဲ့လျှင်၎င်းကိုရဲအားအကြောင်းကြားပါကကျွန်ုပ်တို့၏ Parallel Justice အစီအစဉ် ၀ န်ထမ်း များသည်အဖြစ်အပျက်၏တစ်ပတ်အတွင်းသင့်နှင့်အဆက်အသွယ်ရှိသင့်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ရဲအားအစီရင်ခံခြင်းမပြုပါက၊ သို့မဟုတ် Parallel Justice မှမကြားရသေးပါကသင့်အမှုနှင့်ရာဇ ၀ တ်မှု၏နောက်ဆက်တွဲအကြောင်းအရင်းအမြစ်များ၊ အထောက်အပံ့နှင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုသင့်အားကူညီပေးနိုင်သည်။ (802) 264-0764 သို့မဟုတ်မှာ Kim ကဂျော်ဒန် kjordan@burlingtonvt.gov (802) 540-2394 သို့မဟုတ်မှာအန်သိုနီဂျက်ဆင်-Miller က ajacksonmiller@bpdvt.org သင်ဘာလင်တန်၏ရာဇဝတ်မှုအပြင်ဘက်တွင်တစ်သားကောင်ဖြစ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏စင်ပြိုင်တရားမျှတရေးန်ထမ်းလုပ်နိုင်တဲ့ သင့်ဒေသအတွင်းရှိအရင်းအမြစ်များကိုရှာဖွေရန်ကူညီပါ။
မေး။ ကျွန်တော်ကရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်ခံရသူတ ဦး ပါ။ ငါပါ ၀ င်ချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်တာဝန်ရှိသူနဲ့အခန်းတစ်ခန်းတည်းမှာငါရှိနေနိုင်တယ်ဆိုတာမသေချာဘူး။ ငါပါဝင်လို့ရသေးလား။
ဖြေ။ ။ သားကောင်တွေဟာလုံးဝဆန္ဒအလျောက်ပါ ၀ င်ပြီးသင့်အားလုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်သင့်အားကူညီရန်သားကောင်နှင့်ဆက်သွယ်ပါလိမ့်မယ်။ ဤတွင်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာတရားမျှတမှု အကြောင်းနှင့် ထပ်တူထပ်မျှတရားမျှတမှု အကြောင်းကိုသင်ပိုမိုလေ့လာနိုင်သည်။ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာတရားမျှတမှုဆိုသည်မှာပြစ်မှုအတွက်တာဝန်ရှိသူ၊ ရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်ခံရသူ (သူတို့ရွေးချယ်ပါက) နှင့်ရပ်ရွာလူထုအကြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွင်နားလည်မှုနှင့်ဆက်သွယ်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြစ်သည်။ သားကောင်အတွက်ပါဝင်မှု၏အလားအလာအကျိုးကျေးဇူးများအများအပြားရှိပါတယ်။ ၎င်းသည်အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားချိန်တွင်ကျူးလွန်သူ၏စိတ်ထဲတွင်ဘာတွေဖြစ်နေသည်၊ သူ / သူ / သူ / သူတို့စဉ်းစားထားသောအရာကိုကြားနိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ထိုအဖြစ်အပျက်သည်သင့်အပေါ်မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိသည်ကိုသင့်အားမျှဝေရန်အခွင့်အရေးတစ်ခုသင့်တွင်ရှိသည်။ ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရာနှင့်ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုနားလည်ရန်သင်ကျူးလွန်သူ၏မေးခွန်းများကိုမေးနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်လူပုဂ္ဂိုလ်တွင်ပါဝင်ခြင်းကိုမပြုလုပ်လိုပါကသင်၏ဇာတ်လမ်းကိုစာရေးခြင်းဖြင့်ဝေမျှခြင်းနှင့်သင်၏သားကောင်နှင့်ဆက်သွယ်မှုကိုဖမ်းယူခြင်းနှင့်သင်၏ရှုထောင့်ကိုဝေမျှခြင်းအပါအဝင်အခြားရွေးချယ်စရာများကိုသင်ရရှိနိုင်သည်။ လူငယ်ကိစ္စရပ်များအတွက် Kim Jordan (802) 264-0764 သို့မဟုတ် kjordan@burlingtonvt.gov သို့ ဆက်သွယ်ပါ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူကိစ္စများအတွက် Barbara Shaw-Dorso သို့ဆက်သွယ်ပါ
(802) 264-0765 သို့မဟုတ် bshawdorso@burlingtonvt.gov
ဤတွင် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတရားမျှတမှုနှင့်ပတ်သက်။ မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများနှင့်တရားရုံးသို့လွှဲပြောင်းခြင်းအကြောင်းကို ကြည့်ပါ ။